Na ny zazalahy lehibe aza hadinony ny fahaizany mampiasa! | Martech Zone
Talata, Aprily 17, 2007 Douglas Karr
Te-hanoratra fanamarihana fohy momba ny olana mahasosotra mahasosotra sasany izay tsikaritro tamina fampiharana roa aho.
Araka ny Wikipedia, amin'ny fifandraisan'ny solosaina sy ny solosaina amin'ny solosaina, ny fampiasana dia mazàna manondro ny fahamendrehana sy ny mazava izay namoronana ny fifandraisana amin'ny programa solosaina na tranokala iray.
Ny voalohany izay homeko dia ny olana Usability miaraka amin'ny Pejy fandraisana Google. Raha ampidiro ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny Google ny singa Google Reader, dia mandeha tsara izany. Misy; na izany aza, olana iray manjelanjelatra: ny rohy 'mark all is read' dia hita eo ambanin'ilay rohy misokatra hatrany Google Reader.
Fotoana vitsy izao, tsindrio ilay rohy tsy mety ary mandeha ho azy amin'ny famakiana azy ireo ny fahana rehetra. Fampiasana mahatsiravina ity. Amporisihiko Google hamindra ity rohy FAR miala amin'ny rohy hafa ity.
Ny ohatra faharoa dia Microsoft Entourage, izay misy ny bokotra Delete amin'ny mailaka iray eo akaikin'ny bokotra Junk Email. Ny Microsoft Entourage dia toy ny Outlook ho an'ny OSX, saingy tsy manana safidy ahafahana mamindra ny bokotra manodidina azy. Vokatr'izany dia tsy nahy aho nanisy mailaka manan-kery tamin'ny folder Junk Email ahy. Mba hanafoanana izany dia mila manafoana ny fitsipiky ny Junk Email aho, tadiavo ny mailaka ao amin'ny folder Email Junk, ary avy eo averiko any amin'ny Inbox-ko. Arrgh!
Izaho dia iray amin'ireo lehilahy tia mandamina sy mampifanaraka ny zava-drehetra ao anaty rindrambaiko. Mino aho fa ny roa amin'ireto dia ohatra iray izay nahatonga ny fandaminana ireo singa hanana heviny lojika - fa tsy fombafomba. Zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba ampiasain'ny mpampiasa ny rindranasao mba hahafahanao mijanona ny hadisoana tsy nahy tamin'ny alàlan'ny firafitry ny singa ratsy.
Ampitahao amin'ny WordPress, izay manao asa mahafinaritra mampisaraka ireo singa izay tsy miaraka. Jereo ny Tehirizo ary tohizo ny fanovana ary Save bokotra eo an-tampony (izay ny fototry ny paositra) sy ny Fafao ity hafatra ity bokotra eo amin'ny farany ambany amin'ny ilany havia… lavitra, mifanalavitra.
Asa tsara, WordPress!
Manana ohatra amin'ny olana mahatsiravina momba ny Fampiasa amin'ny fampiharana ampiasainao ve ianao?
Apr 18, 2007 amin'ny 12: 37 AM
zava-misy kely tsy fantatra: Izaho no antony mahatonga ny bokotra mamafa ho mena.
satria tsy haiko ny mamaky ny mahasamihafa ny mamafa sy ny manangona 🙁
Apr 18, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Na volondavenona mainty ho an'ireo olona mpandoko loko. 😉
Apr 18, 2007 amin'ny 9: 52 AM
Raha ny marina, raha mampiasa serivisy fampiantranoana maimaim-poana amin'ny WordPress miaraka amin'ny IE7 ianao ary manandrana manitatra ny fizarana hoe "Optional Excerpt" dia tsy hitatra tanteraka izany. Ity dia mety ho glitch mihoatra ny olana fampiasana, fa tsy ny kely kokoa, dia mety hanelingelina.
Apr 18, 2007 amin'ny 10: 57 AM
Izay rehetra ao amin'ny myspace.
Wes, nahatonga ahy kohaka ilay izy ary nihomehy mafy aho. Tena marina ny anao!